नेपाली युवा र अरबी युवतीको बि,योगान्त प्रेम कथा,… एकपल्ट समय दिएर हेर्नुहोला – Khabar Patrika Np
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८ समय: २३:०२:४४
साउदीका हरेक पत्रपत्रिकामा नुरको आ`त्मह त्याको खबरले म आश्चर्य`मा परेँ म अफिस भित्रैको एउटा क्याबिनमा कम्युटरमा ब्यस्त रहन्थे ।तर अचान`क पत्रिकामा परेको मेराे नजरले अचम्मै बनायो । हुन त मलाइ पनि कहाँ अरबी पढ्न आउथ्यो र राजको मोबाइलमा देखेको फोटोको कारण`ले चिनेको मात्रै हो ।
मैले प्रत्यक्ष देखेको भने थिइन । कालो बुर्र्का सहित साउ`दीमा महिलाले लगाउने कालो लुगा लगाएर यात्रा`रत हुन्छन् यिनीहरु । रुखले त बरु आफ्नो पात बोक्राले ढाक्दैन तर उनी`हरुको शरीरको कुनै ठाँउ पनि ढाक्न बाँकी राख्दैनन् । राजलाइ झु’न्ड्याएर मा`रिएको महिना दिन नहुँदै नुरको आ त्मह`त्याले म मात्र होइन नुरका परिवार पनि अच`म्मित भए होलान्।
आज नुरको आ त्मह त्याको खबरले राजको अन्ध`कार पुर्ण दिन अनि उसलाइ गुमा`एको पल झलझल आँखामा आउन थाल्यो । साउदी अरबको एक प्रतिष्ठित कम्पनि`मा हामी दुबै जना सँगै काम गर्थ्यौ । हामी मतलब राज र म । हामी साउदीको मुटु राज`धानी रियादमा थियौ । राज सप्लाइ डिपा`र्टमा कार्यरत थियो । उनी सप्लाइको क्रममा साउदीका घर घरमा जानु पर्थ्यो । त्यसै क्रममा राजको भेट नुरसँग भएको थियो ।
राज सँधै उनको बारेमा बताउथे । नुरको प्रशंसा गरेर कहिल्यै पनि नथाक्ने राजको ब्यवहार देखेर म आफै थकित हुन्थे त्यस्तै साथ`को खोजीमा ।राजको ब्याख्यान`मा म आफै अल`मल्ल हुन्थेँ ।आखीर नुरमा के छ यस्तो ! मलाइ राजले फोटो देखाए पनि म रुपमा कहिल्यै बिस्वास गर्दैन थेँ ।
रुपमा किन मर्छ`स् राज सुन्दर फुल भित्रको राग अनु`राग अनि बिषा`दीको पनि अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ । हुन त तेरो रोजाइ नराम्रो त हुन सक्दैन तर पनि होस् गर राज, यहाँको का`नुन तैले सुनेकै छस् । फेरि हकिकतमा देख्न नपरोस् । राज भावुक बनेर भन्थे – “बिशाल, मायामा ज्यानै दिनपरे पनि म तयार छु ।
उनले दिएको यती मायानै मेरो जिन्दगी`को पुर्ण खुसी बन्नेछ । हेरौ जे लेखेको छ यो भाग्यमा त्यही हुन्छ । मलाइ यही म`र्न लेखेको छ भने म पराइकै माटोमा मरौ`ला । हो मलाइ मेरो स्वच्छ पशुपतीमा ठाँउ नमिल्ला, बाग्मती`को पानीले चोखीन नपाइएला,चन्दनसँगै जल्न नपाइएला तर मायामा दिएको ज्या`न कहाँ खेर जान्छ र ? बिशाल, हुन त म अभागी ठहरीनेछु, बिदेशको माटोमा पुरीँदा तर पनि माया भनेको माया हो ।
भो, भाउजुसँग मलाइ नि कुरा गरान त यार । म पनि यसो सुनौ मेरी भाउजुको स्वर जुन स्वरमा राज अल्झिएको छ ।मेरो कुरा सुनेपछी राजले फोन लाउड स्पिकरमा राखेर सुनाउथ्यो ,उताबाट आवाज आउथ्यो “ मिन हुवाको, राजले नरम भएर जवाफ दिन्थ्योस्“सदीग”साथी ”िबशाल । उनीहरुको कुरा कती खेर सकिन्थ्यो मैलै कहिले पनि थाहा पाइन ।
उनका बाबा आमाले पु`लीसमा कम्प्लेन गरे । ठुलो रडाकोनै मच्चियो ।अन्त्यमा राजलाइ फाँ`सी सुनाइयो । फाँ`सी हुने अन्तिम रात राजले एउटा पत्र लेखे`को थियो र मलाइ भनेको थियो ।
राज यो पत्र एक चोटी पढेर नुरलाइ दे है । मैले किन हेर्नु राज र भन्दा राज भन्दै थिए , सायद तैलेनै उल्था गर्नु पर्ला बिशाल । मेरो आँखाभरी आँसु टम्म थिए । म डाँको छाडेर रुन पनि सकिरहेको थिइन । तर राजको आँखामा भने डर,त्रा`स,पिर भनेको पटक्कै थिएन । माया प्रतक्ष झल्किन्थ्यो ।
मैले हतार हतार राजको पत्र खोँले अनी पढ्न थाँले ।‘मेरी नुर जुनी जुनी जिउनु ल । तिमी त अन्तिम पटक भेट्न पनि आइनौ । तर पनि मलाइ दुख मन छैन । किनकी म तिमी जन्मेको माटोमा हाम्रो माया बिसर्जन गर्दैछु। तिमीले देखाएको सपनाको महलमा म जिन्दगी बिसर्जन गर्दैछु ।भेट्दा,कुरा गर्दाको तिम्रो ब्यवहारले म तिमीमा नै समर्पित हुन्थेँ अनी अनौठो सपना देख्थे ।
तिमीलाइ मेरो सिमली भुवा उड्ने गाँउमा लगेर कोइलीको स्वरसँग दोहोरी खेलाउने ठुलो धोको थियो । तिमीलाइ थाहा छ नुर मेरो घर पहाडमा छ । प्रकृतीको धनी मेरो गाँउ छहरा,पहरा,लहराल े भरीपुर्ण छ ।
तिमीलाइ थाहानै छ होला । पढेकी पनि हौली, म त सगरमाथाको देशको मान्छे ।तिमीलाइ सगरमाथा घुमाउने रहर त रहरै भयो नुर । तर पनि मेरो ठम्याइ छ । त्याँहाको प्राकृतीक सौन्दर्यहरु तिमीलाइ देखेर मोहित हुने थिए ।कोइलीले आफ्नो स्वर निकाल्नु पहिले तिम्रो स्वर सुन्न चाहन्थ्यो । अनी म तिम्रा हात समाएर सबैको सामु भन्थे।
उपहार दिँदैमा,कुनै एक बिशेष दिनमा माया जाहेर गरेर माया गरेको भन्ने सोच्ने तिम्रो बाबालाइ माया गर्न सिकाउ नुर । तिमीलाई त माया गर्न आउछ नी है ! तिमी सँग भेट हुने यही अन्तीम हो । त्यसैले मलाइ यो पत्र टुङ्ग्याउन मन छैन|अनी चाहन्न पनि तर पनि लामो गन्थनमा फस्दा लेख्दा लेख्दै अन्त्यमा तिमीसँग बिदा माग्न पनि नपाइएला की झै लाग्छ । त्यसैले हाम्रो भेट अब सक्नु पर्छ मैले । यो बेग रोक्नु पर्छ मैले जुन बेगमा म भावना पोखी रहेछु।
मलाइ फोन,नेट सबै तिर बन्देज लगाइ`एको थियो । आज मात्रै सबै थोक बाट फुकुवा गरीएको हो । मलाई मेरो साथीले एउटा भिडियो हेर्छस् भनेरदिएको थियो । त्यो भिडियोमा राज`लाइ झुन्ड्याएर मारी`एको रहेछ । जुन कुरा मैले सहन सकिन । भिडियो हेर्नु लगत्तै राजको पत्र पनि पाँए । उहाँ सँग मैले पनि पत्रमा भेँटे ।
बिशाल बाबु हजुरहरुले त मलाइ निष्ठुरी भन्ने सोच्नु भएको होला ।त्यसैले मैले हजुरलाइ मेरो बारेमा भन्ने यही एउटा मेलको साहारा लिँए । म निष्ठुरी होइन बिशाल बाबु ।मैले पहिलो पटक कसैलाइ प्रेम गरेको थिँए त त्यो राज थियो । अनी गर्नेछु त त्यो पनि राजलाइ । सत्यता थाहा नपाउदा सम्म त राज सँग भेट्ने आसा जिँउ`दो थियो तर सबै थाहा पाए पछी मैले जिउनुको अर्थ देखिन ।
उही हजुर`को हुन नसेकी,हजुरले फोनमा जिस्काउने,हजुरकी भाउजु ‘नुर’ – खसोखास केही समय अघि प्रकाशित भएको यो कथा र तस्बिरलाई हामीले लिएका हौं